ओलीपक्षीय नेताहरु माधव नेपालसँग गोप्य छलफलमा के छ तयारी ? — Imandarmedia.com
ओलीपक्षीय नेताहरु माधव नेपालसँग गोप्य छलफलमा के छ तयारी ?
काठमाडौँ। एमाले विभाजन कि एकता भन्ने प्रश्न निरुपण हुन सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच संवाद नै हुन नसकेका बेला दोस्रो तहका नेताहरु एमाले एकताका लागि प्रयासरत छन्। दोस्रो तहका नेताहरुकै प्रयासमा गत असार २७ गते तयार पारेको १० बुँदे एकता प्रस्तावप्रति वरिष्ठ नेता माधव नेपालले स्वीकार गरेका छैनन्।
कार्यदल सदस्यहरुले दुई नेताको समझदारीमा शक्ति बाँडफाँड गर्न उनीहरुलाई जिम्मा छोडेको बताएका छन्। तर, त्यसका लागि ओली र नेपालबीच भेटवार्ता गर्न जरुरी हुने भएकाले उनीहरुबीच संवाद गराउने प्रयास कार्यदलका सदस्यसहितका दोस्रो तहका नेताहरुले प्रयास गरिरहेका छन् दोस्रो तहका नेताहरुको यस्तो प्रस्तावपछि नेता नेपालले पहिला ओली पक्षका कार्यदलमा समेत रहेका सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसँग छुट्टै छलफल गरेर मात्रै ओलीसँग छलफल गर्ने या नगर्ने निर्णय दिने बताएका थिए।